सुन्दरहरैचामा फेला परिन् नेपालकै होची युवती – samyantra.com
सुन्दरहरैचामा फेला परिन् नेपालकै होची युवती
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ११, २०७४ समय: ४:२३:५६
शिव भट्टराई । मोरङको सुन्दरहरैंचामा ३२ इन्च होची युवती भटिएकी छिन् । गछिया खोलाको गिट्टी कुटेर जिविका चलाउदै आएका सुन्दरहरैचाका रमेश मरर (ऋषिदेव) की २० बर्षिया छोरी मालती ऋषिदेवको उचाई ३२ इन्च मात्रै छ ।
मालती अत्यन्त होची भएपनि हालसम्म सार्वजनिक भएको थिएन । घरको पारिवारिक अवस्था नाजुक भएका कारण बाबु रमेशले गछिया खोलाको गिट्टी कुटेर जिविका चलाउदै आएका छन् । गरिवी र आर्थिक अवस्थाले पिल्सिएको मरर (ऋषिदेव) परिवार सुन्दरहरैंचाको वडा न. ४ स्थित बडहरा खागटोल साइडमा रहेको एक झुप्रो घरमा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् ।
मालती बिश्वमा कतिऔ होची हुन् भन्ने यकिन नभए पनि बिश्वकै सबैभन्दा होची मध्येमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि नेपाकै स्व. चन्द्रबहादुर डाँगी र खगेन्द्र थापा मगर विश्वकै होचा ब्यक्तिको रूपमा बिश्वभर परिचित भएका थिए । स्वर्गीय दिपेन साहलााई पनि बिश्वकै होचा कलाकार मानिएको थियाेे ।
आफनो छोरी होची भएकै कारण र सानैमा हिडडुल गर्न नसकेकोले विधालयमा पढाउन नपाएको बाबू रमेशले बताए । ऋषिदेव परिवारले मालतीको नेपाली नागरिकता बनाउन जादा जन्मसिद्धको आधारमा नदिएको समेत दुखेसो पोखेका छन् ।
वडाअध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार रमेशले छोरीको नागरिकता बनाउन सिफारिस लिन खोजेका थिए । तर १८ वर्ष पुगे पनि होची र सानै भएको कारणले जिल्ला प्रशासनमा सिफारिस पठाऊदा जन्मसिद्धको नागरिकता नपाउने आशंकामा सिफारिस बनाइएन । मालतीको परिवारमा आर्थिक समस्या भएकोले गुजारा चलाउन समस्या भएकोले जिल्ला प्रसासन कार्यालय गइ नागरिकता र अन्य सहयोगका लागि आफुले पहल गर्ने उनले बताए ।
उनी नेपाल या विश्वकै होची युवती हुन सक्ने भन्दै वडाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रचार गरी सहयोग गरिदिन संचारकर्मीहरुसंग अनुरोध गरेका छन् ।